Paul Pogba U Doonayo Inuu Ka Tago Man United Xagaagan Oo La Ogaaday %
By Ramzi Yare	 On Jul 10, 2019
Paul Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaa wax qarsoon ka dhigin in ciyaaryahanka uu doonayo inuu isaga tago Manchester United xagaagan.
Raiola ayaa u sheegay idaacada Ingariiska ee talkSPORT in kooxda ay muddo dheer ka warqabtay dareenka ciyaaryahanka, waxaana uu isku dayayaa inuu xiddiga reer France u wareejiyo midkood Real Madrid ama Juventus.
Sida ay sheegtay jariirada The Sun , sababta ugu weyn ee uu Pogba u doonayo inuu ka tago Old Trafford ayaa ah koobab la’aantooda, isagoo aaminsan inaysan koob ku guuleysan doonin ilaa iyo inta uu joogo Ole Gunnar Solskjaer.
Paul Pogba ayaa ku afar koob oo Serie A ah la qaaday Juventus laakiin intii uu joogay Manchester United waxa uu ku guuleystay kaliya League Cup iyo Europa League.
Ka dib xilli ciyaareed xun oo soo maray sannadkii hore taasoo keentay inay u soo bixi waayaan Champions League, Pogba ayaan arkin in Red Devils ay ku guuleysan karto koobab waa weyn.
Waxayna taasi keentay inuu raadsado meel kale iyadoo Real Madrid ay hogaamineyso tartanka loogu jiro saxiixiisa, madaama ay isku diyaarinayaan inay u tartamaan La Liga iyo Champions League ka dib lacag badan oo ay geliyeen suuqa kala iibsiga xagaagan.
Juventus ayaa sidoo kale isku dayaysa inay ku soo celiso Turin iyagoo isku dayaya xilli ciyaareedka danbe inay hantaan koobkoodii 9aad ee isku xiga ee horyaalka Serie A, waxay sidoo kale doonayaan inay ka gudbaan habaarka ka heysta Champions League.
Inkastoo Man United ay ku rajo weyn tahay inay wadada guusha ku soo noqoto inta uu hogaaminayo Solskjaer hadana baaxada howsha u taala iyo saxiixyada ay sameeyeen xagaaga ayaa soo jeedinaya in dib u dhiskooda uu qaadan doono waqti dheer ka hor inta aysan mar kale ku soo laabanin booskoodii lagu yaqiinay.